ဥရောပသတင်းများ • ဥရောပတိုင်းမ်သတင်း
စနေနေ့, မေလ 28, 2022
ပိုလန်နှင့်တူရကီ ဆန်းသစ်တီထွင်သူများသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆုများ ရရှိသူများဖြစ်သည်။
- 27 မေလ 2022
ပါမောက္ခ Haberal သည် Ihsan Doğramacı Family Health Foundation Prize ကိုရရှိခဲ့ပြီး Severe Hypothermia Treatment Center မှ ဒေါက်တာ Lee Jong-wook Memorial Prize ကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ရရှိခဲ့ပါသည်။
အန္တာတိက Orca ရေငုပ်သင်္ဘော မီးတောင်သည် မြေငလျင် 85,000 ဖြင့် ပေါက်ကွဲ
GFZ GeoForschungsZentrum Potsdam၊ Helmholtz စင်တာ - 27 မေလ 2022
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဓာတုဆေးဝါးများနှင့် ထိတွေ့မိသော မိခင်များနှင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်များအတွက် UNODC မှ ပံ့ပိုးကူညီရန် ဆွေးနွေးသည်။
Newsdesk - 27 မေလ 2022
ဒိန်းမတ်- 54 နှစ်မြောက်တွင် Scientology ကို စိတ်ဝင်စားမှု တိုးလာသည်။
အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကောင်စီ- “ကျွန်ုပ်တို့သည် မိသားစုတစ်စုတည်းဖြစ်သည်”
ဥရောပတိုင်းမ် - 27 မေလ 2022 0
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ စုဝေးကာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုနှင့် ညီညွတ်မှုရရှိရေးတို့အတွက် စုပေါင်းကြိုးပမ်းမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
Abu Dhabi International Book Fair မှ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲ ဒါရိုက်တာများ လက်ခံကျင်းပ...
သတင်းစားပွဲ - 26 မေလ 2022 0
... မှ ဒါရိုက်တာများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ စာအုပ် ဝိုင်း။ တက်ရောက်လာသူများသည် ... လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကြေညာသူ မျက်နှာ။ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများစွာ ... အာရပ်စီစဉ်သူများ စာအုပ်များ တရားပွဲတွေမှာ ထိထိရောက်ရောက် ... ပံ့ပိုးပေးမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ စာအုပ် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ; အကြံပြုချက်တွေကို မြှင့်တင်ပါ…
ယူကရိန်းစစ်ပွဲ- စစ်ပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ထိန်းသိမ်းရန် ခွင့်ပြုထားသော စည်းမျဉ်းသစ်များ...
အာဖရိကနိုင်ငံများသည် 'အစားအစာစနစ်များ အသွင်ပြောင်းခြင်း' ကို ဦးဆောင်နေသည်- Guterres
တရုတ်-ကုလ သမဂ္ဂအတွင်း ဝီဂါ ဖိနှိပ်မှုအပေါ် ထုတ်ဖော်မှုအသစ်...
အိုင်ယာလန်ပြည်သူ ထက်ဝက်နီးပါးက အစိုးရကို မယုံကြည်ကြဘူး။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်က တက္ကဆက်ပြည်နယ် ပစ်ခတ်မှုမှာ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
ယူကရိန်းတွင် ရုရှားတပ်ဖွဲ့များ၏ ယဉ်ကျေးမှု ပျက်သုဉ်းမှုသည် နှစ်အတော်ကြာအောင် တုန်လှုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်းသူများ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခြင်းအပေါ် ဥရောပကောင်စီက အပြီးသတ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
25 မေလ 2022
UNODC နှင့် အာဖရိကတောင်ပိုင်းတို့သည် အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် အကြမ်းဖက် အစွန်းရောက်ဝါဒကို တိုက်ဖျက်ရန် အင်အားစုများ ပူးပေါင်းကြသည်။
ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှာ မတူကွဲပြားမှုတွေ ပါဝင်လာစေဖို့ ဆွေးနွေးပွဲ...
Tedros သည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ရန် ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။
24 မေလ 2022
ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းချက်သည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် လွန်ခဲ့သော ၁၀၅ နှစ်က ပရောဖက်ပြုချက်ကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေသည်။
MAY အထူးထုတ်ဝေမှုကို ရယူပါ။
သတင်းများအတွက် စာရင်းသွင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူး PDF ထုတ်ဝေမှုများကို ရယူလိုက်ပါ။
စာရင်းသွင်းမှုကို အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ကြည့်ပါ။
ငါကိုလက်ခံ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ လည်းပဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေန. (စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့ မင်းကို spam လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး)
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရင်းသွင်းသူစာရင်းတွင် အောင်မြင်စွာ ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခု သင်သည် သင့်မေးလ်ကို စစ်ကြည့်ရန်သာလိုတော့သည် (ဟုတ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံ စက်ရုပ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း အမှားများလုပ်တတ်သောကြောင့် spam လည်း ဟုတ်သည်) နှင့် အတည်ပြုပါ။
27 မေလ 2022
ရုရှား– ထောင်ငါးနှစ်ကျပြီးနောက် ဒိန်းမတ် ယေဟောဝါသက်သေတစ်ဦး လွတ်မြောက်လာသည်။
ယူကေပါလီမန်တွင် ပါလီမန်တွင် ပါလီမန်အမတ်များနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံတို့၏တန်ဖိုးကို ဆွေးနွေးကြသည်။
- သီးသန့်ကဏ္ဍ -
The European Times ကိုမျှဝေပါ။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် အနာဂတ်အတွက် တွန်းအားပေးရန်အတွက် 'ရာသီဥတုပျက်သူများအတွက် အလုပ်မလုပ်ပါနှင့်' ကုလအကြီးအကဲ ပြော
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက်အာဖရိက- ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူငယ်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း အများဆုံး
သုတေသန၏ရှည်လျားသောညစဉ်အတွင်း မှုခင်းတားဆီးကာကွယ်ရေးတွင် အသိပညာ၏စွမ်းအား
All သတင်းဆောင်းပါး View
ယူကရိန်းစစ်ပွဲ- စစ်ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ထိန်းသိမ်းရန် ခွင့်ပြုထားသော စည်းမျဉ်းသစ်
အီးယူကောင်စီနှင့် ဥရောပကောင်စီ - 26 မေလ 2022
ယူကရိန်းမှာ ကျုးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေအတွက် တာဝန်ခံမှု ရှိစေဖို့ ကူညီပေးဖို့ Eurojust ဟာ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဓိက အထောက်အထားတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သိမ်းဆည်းဖို့ ခွင့်ပြုတဲ့ စည်းမျဉ်းအသစ်တွေကို ဒီနေ့ ကောင်စီက အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
သတင်းကဏ္ဍ - 26 မေလ 2022
ရုရှားတပ်ဖွဲ့များ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ယူကရိန်း၏ သမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုကို ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် စစ်ပြီးခေတ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အရှိန်အဟုန်အပေါ် ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည် ဟု လွတ်လပ်သော ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သတိပေးခဲ့သည်။
လူမှုရာသီဥတုရန်ပုံငွေ- စွမ်းအင်အကူးအပြောင်းအတွက် လွှတ်တော်၏ အကြံဉာဏ်များ
ဥရောပပါလီမန် - 24 မေလ 2022
အီးယူသည် စွမ်းအင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို လိုလားသည်။ လူမှုရာသီဥတုရန်ပုံငွေသည် စွမ်းအင်ဆင်းရဲမွဲတေမှုဒဏ်ကို အခံရဆုံးသူများကို ကူညီရန် မည်သို့ရည်ရွယ်သည်ကို ရှာဖွေပါ။
Willy Fautre - 24 မေလ 2022
ထောင်ငါးနှစ်ကြာအောင်နေခဲ့ရပြီးနောက် Dennis Christensen သည် မေလ ၂၄ ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဒိန်းမတ်သို့ နှင်ထုတ်ခံရဖွယ်ရှိ...
ယူကရိန်းရှိ Donohoe- ဤဆိုးရွားသောအချိန်ကာလတွင် ၎င်းတို့၏ လူသားများ ခံစားနေရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်သတိပြုမိပါသည်။
Newsdesk - 24 မေလ 2022
23 ခုနှစ် မေလ 2022 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော Eurogroup အစည်းအဝေးအပြီးတွင် Paschal Donohoe မှ မှတ်ချက်စကားများဖြင့် ပြည်သူများအတွက် ဤသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို စတင်ပါရစေ...
ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် မတူကွဲပြားမှုနှင့် ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဆွေးနွေးပွဲ
22 ခုနှစ်ဧပြီလ 2022
Brian Evans သည် Narada Michael Walden မှထုတ်လုပ်သော iTunes တွင် ဧပြီလ 20 ရက်နေ့တွင် “I'm A Traveler” ကို ဖြန့်ချိမည်
17 ခုနှစ်ဧပြီလ 2022
Sports ၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ
ဘုရားကျောင်းက မှော်ပညာကို ဘာကြောင့်ဆန့်ကျင်တာလဲ (၁)
စစ်ပွဲကြောင့် ရုရှားကို လူဘယ်နှစ်ယောက် ထားခဲ့လဲ။
8 မေလ 2022
Interviews မှ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ
ဤသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဆောင်းပါးများရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Torsten Hjelmar - 25 မေလ 2022
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis သည် သူ၏ “ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောထား” အတွက် ရှေးယုံကြည်သူများ၏ ရုရှားခေါင်းဆောင်ကို ချီးကျူး
Jan Leonid Bornstein - 19 မေလ 2022
Newsdesk - 19 မေလ 2022
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးကို အရေးပေါ်ဖုန်းဆက်ပါ။
သတင်းစားပွဲ -7မေလ 2022
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနေ့- 'ဘဝအားလုံးအတွက် မျှဝေခံစားနိုင်သော အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ရန်' ကုလသမဂ္ဂ အကြီးအကဲ တောင်းဆို
22 မေလ 2022
စတော့ဟုမ်း+၅၀ တွင် ယုံကြည်ခြင်းအခြေပြု ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
Godwits ၏ စူပါပါဝါ
21 မေလ 2022
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းသည် ရေနှင့် မိလ္လာကို လက်လှမ်းမီရန် ခြိမ်းခြောက်နေသည်။
မြောက်ပိုင်းအလင်းတန်းများကို မမြင်ရသော်လည်း ကြားနိုင်သည်။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာသည် အဘယ်ကြောင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်သနည်း။
COPENHAGEN၊ ဒိန်းမတ်၊ မေလ 26 ရက်၊ 2022 /EINPresswire.com/ -- Scientology ကို စိတ်ဝင်စားမှုသည် 54 နှစ်မြောက်တွင် တိုးလာသည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ၁၉၆၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ကတည်းက ဒိန်းမတ်တွင် သိပ္ပံပညာရှင်များ ရှိနေစဉ်၊
ဥရောပတိုင်းမ် - 27 မေလ 2022
Newsdesk - 25 မေလ 2022
ရေးသားသူ: Fr. Vasily Zenkovsky သည် ရှေးရိုးမနုဿဗေဒတွင် အနောက်တိုင်းဂိုဏ်းဂဏများနှင့် ကွဲပြားပုံကို ဥပမာအနေဖြင့်၊ မိခင်ဘာသာစကားအပေါ် ကွဲပြားသော သဘောထားများ ...
သက်သေပြချက်- အမျိုးသမီးများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွေ့ဖက်မှု လိုအပ်သည်။
Travel ၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ
Abu Dhabi International Book Fair သည် အာရပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ စာအုပ်ပွဲဒါရိုက်တာများကို လက်ခံကျင်းပပေးပါသည်။
DC နှင့် Marvel Comics နှစ်ခုစလုံးတွင် ကျော်ကြားသော ကာတွန်းစာအုပ်အနုပညာရှင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။
Andrea Canepari သည် ရောမမြို့ရှိ ၎င်း၏ 'The Italian Legacy in Philadelphia' စာအုပ်ကို တင်ဆက်သည်။
ဥရောပသတင်း၊ သတင်းဥရောပ၊ ဥရောပပါလီမန်၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အားကစား၊ နိုင်ငံရေး၊ အထူးသတင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်
© FRVS+MPCP 2022။ European Times® သတင်းကို EU အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ European Times® နှင့် The European Times® ၏ လိုဂိုများသည် FRVS+MPCP မှ မှတ်ပုံတင်ထားသော EU ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။
MADRID- Calle Puerta de Abajo 16 Alpedrete 28430 Madrid // +34.643-78.05.72
ငြင်းဆိုမှုဆိုင်ရာ သဘောထားများ- စာရေးဆရာများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များ သို့မဟုတ် ဆောင်းပါးများတွင် ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားသော ထင်မြင်ယူဆချက်များသည် ၎င်းတို့ကို ဖော်ပြသူများသာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ရှိပါသည်။ အမှားအယွင်းများတွေ့ပါက အမှားပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြသခွင့်ကို ရှာဖွေရန် သတင်းအဖွဲ့ထံ အမြဲဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ငြင်းဆိုမှုဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်ဆိုချက်များ- ဤဆိုက်ရှိ ဆောင်းပါးများအားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေထားပါသည်။ ဘာသာပြန်သည်။ သံသယရှိပါက မူရင်းဆောင်းပါးကို အမြဲကိုးကားပါ။ နားလည်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။